Dawladda oo ku dhawaaqaday tallaabadii shanaad ee dhimista khidmadda - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dawladda oo ku dhawaaqaday tallaabadii shanaad ee dhimista khidmadda
La daabacay måndag 16 september 2013 kl 16.38
Dawladda ayaa sidii horey looga filayeyba soo ban-dhigtay maanta qorshaheedii ahaa iney ku tallaab-san doonto tallaabadii shanaad ee dhimista khidmadda mushaarooyinka shaqaalaha, halka dhanka kale ay dawladdu doonayso sidii ey kor ugu qaado lahayd saqafka mushaarooyinka laga qaado khidmadda dawliga ah.
Dhimista khidmadda ee mushaarooyinka shaqaalaha ayaa dawladda ugu kici doona miisaaniyad gaarsiisan 12 bilyan oo koron, halka dhanka kale la fileyo in shaqaaluhu ku macaashaan 200 illaa iyo 300 oo koron bishiiba.
Kor u qaadidda saqafka mushaarooyinka laga jaro canshuuraha dawliga ah ayaa dhankiisa kaga kici doona dawladda miisaaniyad gaarsii-san 3 bilyan oo koron. Qorshahani oo macnihiisu yahay in aan wax khidmad dawli ah laga qaadi karin mushaarooyinka inta uu ugu sarreeyo 37 400 oo koron.
Labadan qorshe miisniyadeed ayaa dawladda ugu kici doona 15 bilyan oo koron, hase yeeshee sida dawladdu sheegtay abuuri doonto shaqooyin gaarsiisan 13 000 oo hor leh.
Madaxa dawladda ee dalkan Iswiidhen Fredrik Reinfeldt ayaa sheegay in siyaasadda dawladdiisu weli salka ku hayso dhimista khidmadda ee laga dhimo shaqaalaha qaata mushaarooyinka dhexe iyo kuwa hoose. Halka dhanka kale ay khidmaddan maanta la dhimey ka dhigan tahay in shaqaalaha xannaaneeya bukaan-socodka uu mushaarkoodu kor u kici doono 200 bishii, dhakhaatiirtana 600 oo koron bishiiba:
- Tallaabadan ayaa noo ahayd mid nalagu garto. Iyadoona ey shaqaalaha mushaarooyinka hooseeyaa ey ku heleyaan khidmad-dhimistan miisaaniyad ka hooseeya midda uu ka heleyo dhakhtarka mushaarrada sare. Sidoo kale.
Laakiin dhaqaalaha dhakhtarka ayaa ka sarreeya midka ka soo geleye shaqaalaha iminkaba qaata mushaarooyinka hooseeya. Sidee ayaa middaa loo sharrixi karaa?
- Guud ahaan waxaa noo muuqatey in saameeyntu kaga badneyd shaqaalaha qaata mushaarooyinka hooseeya iyo kuwa dhexe, sidoo kale waxaan markan ku tallaabsaney midda ah in kor loo qaado saqafka mushaarooyinka ey waajibka ku tahay iney bixiyaan khidmadda dawliga oo aan ka soo qaadney 36.000 koron lana gaarsiiyey 37.500. Middaasi ayay macnaheedi tahay malyuunka ruux ee bixiya cashuurta dawliga ey ka dhinmi doonaan 100.000, waana middaa tan saameeynta yeelata, sida uu sheegay madaxa dawladda Fredrik Reinfeldt oo u warramayay laanta wararka ee Ekot.
Xisbiyada garabka bidix ee Socialdemokrat-ka (S), Bidixda (V) iyo xisbiga Doogga (Mp) ayaa qoraal saxaafadeed ey soo ban-dhigeen ku sheegey iney isku deyi doonaan sidii ey ku joojin lahaayeen tallaabada shanaad ee dhimista khidmadda mushaarooyinka.
Sida ey sheegeen xisbiyada garabka bidix in tallaabadaasi la macne tahay in bulshada Iswiidhen ey fuuli doonaan deymo culculus, halka kuwa dhaqaalaha lihi heli doonaan macaash ballaaran.
Xisbiga Sverigedemokrat-ka ayaa horay u shaaciyay inuu is hor taagi doono kor u qaadidda saqafka lagu bixiyo khidmadda dowliga, hase yeeshee taageeri doono tallaabada shanaad ee khidmad-dhimista mushaarooyinka.